သတင်းစကားနှင့်သတင်းပြန်ကြားချက်များ – Page4– နိုင်ငံတော်သစ္စာဖောက်အာဏာလုယူမှုကြီး (၂၀၂၁) – Civilised Forums of Myanmar Community
It Takes Courage to Stand for the Truth.
Forums in Burmese -...
06/04/2021 5:52 pm
နော်ဝေ ရေနံရန်ပုံငွေအဖွဲ့သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိစစ်အစိုးရနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သည့် ဆိပ်ကမ်းကုမ္ပဏီများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု‌ ဒေါ်လာ ဘီလီယံနှင့်ချီ ရှိသည် ဟု နော်ဝေးသတင်းစာက ရေးသားလိုက်သည်။
နော်ဝေနိုင်ငံ၏ အခွန်ထမ်းများ၏ စုဆောင်းငွေများဖြင့် အကြီးအကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသော Adani Ports ကုမ္ပဏီသည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ စစ်ဗိုလ်ချုပ်များနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများကို Norges ဘဏ်မှမပါဝင်လိုပါက အစိုးရပင်စင်ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (GPFG)ကို ရောင်းချပစ်ရမည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအကြံပေးကောင်စီမှ Chris Sidoti ကပြောကြားသည်။
Never were truer words spoken on this board.
11/04/2021 12:07 am
စစ်တပ်ဟာ တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်ဖို့ မဟုတ်ဖူး၊ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ သက်သက်ဖြစ်တယ်။
ပြည်သူလူထုကဘဲ တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်ရမယ်၊ စီမံခန့်ခွဲရမယ်။
ဒီလိုနားလည်လက်ခံမှု မှားယွင်းခဲ့တဲ့ အတွက် ဒီမိုကရေစီ ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။
အခု - တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်ချယ်လှယ်ချင်တဲ့ စစ်တပ်ကို ပြည်သူလူထုနဲ့အတူ တိုင်းရင်းသား တပ်တွေက တော်လှန်နေကြပြီ။ ပြည်သူလူထုကလဲ တိုင်းရင်းသားတပ်တွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး တိုက်ပွဲဝင်နေကြပြီ။
အနိုင်ရတဲ့ အခါ ဒီတိုင်းရင်းသားတပ်တွေဟာလဲ သူတို့ ပြည်နယ်ဖြစ်ဖြစ်၊ တိုင်းပြည်ကိုဖြစ်ဖြစ် အုပ်ချုပ်ဖို့မဟုတ်ဘဲ ပြည်သူလူထုကိုဘဲ အုပ်ချုပ်ဖို့ အခွင့်အရေးပေးရမှာ ဖြစ်ပြီး၊ ပြည်သူလူထုကလဲ ကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်ဖို့ကို လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်။
ဘယ်ဖက်ကဘဲ ဖြစ်စေ၊ လက်နက်နဲ့ တိုက်ယူပြီး တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်မယ်ဆိုရင် ဒီမိုကရေစီ မဟုတ်ဖူးဆိုတာ ခုချိန်မှာ သဘောပေါက်ပြီး နားလည်လက်ခံမှု မှန်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
12/04/2021 2:16 am
အတည်မပြုနိုင်သေးသော သတင်းတခုအရ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်ကို စစ်ကောင်စီမှ အကြံပေးခန့်အပ်တယ်လို့ ကြားလိုက်ရပါတယ်။ ဗိုလ်ခင်ညွန့်ရဲ့ စကားတခု ရှိတာကို သတိထားစေချင်လို့ ဒီသတင်းစကားပါးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ၈၈ မှာ ဗိုလ်ခင်ညွန့်ဟာ ဘယ်သူ့ကိုမဆို ကိုယ့်လူဖြစ်အောင် လုပ်လို့ရတယ် - ဒီလူမှာ ပါးစပ်ပါဖို့ဘဲ လိုတယ်လို့ ပြောဖူးပါတယ်။ သဘောမှာ အခွင့်အရေးနဲ့ ငွေ မက်လောက်ပေးနိုင်ရင် ဘယ်သူမဆို ပိတ်သွားမယ် ဆိုတဲ့သဘောပါဘဲ။ ဒီနည်းနဲ့ အာဆီယံမှာ အပါအဝင်၊ ကျောင်းသားတပ်မတော် အထိပါဝင်နှောက်ခဲ့တာတွေ ပြန်လေ့လာကြည့်ပါ။ နောက်တခုက ဘာသာရေးနဲ့ သွေးခွဲနည်းဖြစ်ပါတယ်၊ ကရင်တပ်မတော်ကို ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ ခရစ်ယာန်ကွဲအောင် ဘုန်းကြီးတပါးကို အသုံးချသွားတာလဲ သင်ခန်းစာရကြပါစေ။ အခုခေတ်အချိန်ဟာ ၈၈ နဲ့ မတူတော့တာကြောင့် သိပ်ကြောက်စရာမလိုပေမဲ့ ရန်သူကို လျော့မတွက်တာတော့ အကောင်းဆုံးပါဘဲ။
88 Student Contributor
19/04/2021 6:30 am
နီလို့ မဟုတ်ဖူး၊ စိမ်းလို့ မဟုတ်ဖူး၊ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတာ လက်မခံလို့ ဆိုပြီး လူတွေက ပြောကြတယ်။
နေပါအုံး မေးကြည့်စမ်းချင်ပါတယ်၊ မြန်မာပြည်မှာ ပြည်သူလူထုအကျိုးကို ကြည့်တဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီ ဘယ်နှစ်ပါတီများ ရှိပါသလဲလို့။
26/04/2021 2:49 pm
ကမ္ဘာ့မျက်နှာစာမှာ မြန်မာနိုင်ငံကို ပြိုကွဲနေတဲ့ နိုင်ငံတနိုင်ငံနဲ့ လူသတ်စစ်အစိုးရ လို့တွေ့နေကြပါတယ်။ ဒီလိုနိုင်ငံမျိုးဟာ ကမ္ဘာမှာ တရားဝင်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်ကူပါဖူး။ အာဆီယံမှာပင် မအလကို နိုင်ငံခေါင်းဆောင် တယောက်မဟုတ်ဘဲ အာဆီယံနိုင်ငံတနိုင်ငံကို ဝင်သိမ်းထားတဲ့ လက်နက်ကိုင် ဂိုဏ်းခေါင်းဆောင်တယောက် ပုံစံမျိုး ဆက်ဆံထားတာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒါတွေဟာ ဒီနေ့ထက်ထိ ပြည်သူတွေရဲ့ အားသာချက်များပါဘဲ။
28/04/2021 6:27 am
ဓမ္မ နဲ့ အဓမ္မ ဆိုတာ ခုတလော ပြောနေကြလို့ပါ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ ပါဋ္ဌိစကား ဆိုရင်တော့ -
ဓမ္မ = Universal truth လောကရဲ့ အမှန်တရားလို့ နားလည်ပါတယ်။
ဓမ္မက အဓမ္မကို နိုင်ပါစေဆိုတော့ ? ? ? 🙄
ကုသိုလ်ကံ က အကုသိုလ်ကံကို နိုင်ပါစေ ဆိုရင်ပိုအဆင်ပြေမယ်ထင်ရတာဘဲ။
Use only English letters in the name.
(မြန်မာစာဖြင့် ရေးသားလျှင် ယူနီကုဒ်ကို အသုံးပြုပါ)
Maximum allowed file size is 5MB
Additionally, whilst using the Civilised Forums of Myanmar Community the following information may be collected (not public):
Most activity on Civilised Forums of Myanmar Community is public, including your profile information mentioned above. You also may choose to publish your location in your profile. Information posted about you by other people who use our forum may also be public. For example, other people may mention you using @nickname in posts.
We provide certain features that let you communicate more privately or control who sees your content. For example if forum admin is enabled, you can check the "Set Topic Private" checkbox when you createatopic or click on the "Private" button of your topic first post, or use the Private Messages to have non-public conversations. In these cases we will store and process your communications and information related to them. This includes message content, images, information about whom you have communicated with and when to better understand the use of our community, to protect the safety and review the reported messages. We share the content of your Private Messages with the people you’ve sent them to; we do not use them to serve you ads. When you use features like Private Messages to communicate, remember that recipients have their own copy of your communications on Civilised Forums of Myanmar Community - even if you delete your copy of those messages from your account - which they may duplicate, store, or re-share.
Choose an appropriate username. When you join asamember or post asaguest, chooseausername that is appropriate and non-offensive. Your username can be seen by other members. Members can change their display name at any time.
Do not share your login details. If you'reamember, do not give your user name and password to anyone. Do not use another member's account to login to the forum. Dual logins will cause an account lockout.
No trolling. Don't make posts that are inflammatory just to get people riled up.
No offensive language. All forms of swearing, hateful messages and member bashing are forbidden.
Signature. Users can haveasignature with no longer than5lines. Signatures may containalink to your personal site. Signatures are expected to follow the same rule as posts, which means no flaming, no swearing, no personal attacks, no advertisement and no adult material.
Respect other users. No flaming or abusing fellow forum members. You may attack the message, not the messenger. Criticise ideas, not people. Incendiary messages will not be tolerated. Personal attacks are defined as Personal, Racial, Ethnic, and/or Gender-based insults, slurs, or derisive comments.
Harassment. No threats or harassment of other users will be tolerated. Any instance of threatening or harassing behaviour is grounds for deletion from the forums.
Complaints. All complaints need to be communicated privately using either the "Report" feature and/or eMail.
တောရိုင်း တိရိစ္ဆာန်သဘာဝကို သတိထားနေဖို့ လိုပါမယ်
“Life Of Pi” ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင် ကို ကြည့်ဖူးသူတွေ ရှိကြမှာ...
By Aung, 1 month ago
ဓမ္မ နဲ့ အဓမ္မ ဆိုတာ ခုတလော ပြောနေကြလို့ပါ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ ပ...
By Kaung Sett,2months ago
ကမ္ဘာ့မျက်နှာစာမှာ မြန်မာနိုင်ငံကို ပြိုကွဲနေတဲ့ နိုင်င...
နီလို့ မဟုတ်ဖူး၊ စိမ်းလို့ မဟုတ်ဖူး၊ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတာ ...
ဝဋ်လည်တယ်ဆိုတာကို မြန်မာလူမျိုးတို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။ ဒါပ...
By Aung,2months ago
အတည်မပြုနိုင်သေးသော သတင်းတခုအရ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်ကို စစ...
မှန်တဲ့ဘက်က ရပ်တည်ရဲတဲ့ သတ္တိ မရှိကြသူ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောခဲ့တဲ့ မှန်တဲ့ဘက်က ရပ်တည်ရဲတဲ့ သ...
စစ်တပ်ဟာ တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်ဖို့ မဟုတ်ဖူး၊ ကာကွယ်စေ...
ဒီမိုကရေစီနဲ့ ထိုက်ထိုက်တန်တန် CRPH ကို ထောက်ခံရန်
ဒီအချိန်မှာ CRPH ကထောက်ခံတယ်၊ အားပေးတယ် ဆိုတဲ့ ကိစ္စရပ်...
နော်ဝေ ရေနံရန်ပုံငွေအဖွဲ့သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိစစ်အစိုးရန...
By Aung,3months ago
Tweets by TrueMyanmarInfo
ဖိုရမ်ခေါင်းစဥ်အမည်နဲ့ အထားအသိုတွေကလွဲရင် အစဥ်ပြေပါတယ်
ကြယ်ငါးပွင့် ပေးချင်ပါတယ်၊ သို့သော် ဖိုရမ်ခေါင်းစဥ်တွေ ခွဲထားတာနဲ့ ခေါင်းစဥ်နာမယ်တွေ နဲနဲပြန်စိစစ်စေချင်တယ်၊ အဲဒါတွေအတွက် အခုတော့ ကြယ် ၄လုံးဘဲ ယူထားပါအုံး။
Response from TrueMyanmar.info
အကြံပြုချက်ထည့်သွင်းပေးတာ တန်ဖိုးထားရှိပါတယ်၊ ပြန်လည်စိစစ်ပြီး အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေပါတယ်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Latest Post: သပိတ်မှောက်ရန် အကြမ်းဖက် စစ်တပ်ပိုင် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ Our newest member: Mary Baosky Recent Posts Unread Posts
Topic Icons: Not Replied Replied Active Hot Sticky Awaiting moderation Solved Private Closed